ချောကလက်ထုပ်ပိုးစက်ရုံ၊ ချောကလက်ထုပ်ပိုးစက်ပေးသွင်းသူ - LST စက်
ထုပ်ပိုးစက်သည်ထုတ်ကုန်များကိုထုပ်ပိုးထားသောစက်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးအကာအကွယ်နှင့်အလှအပ၏အခန်းကဏ္playsတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းစက်ကိုအဓိကအားဖြင့်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုထုပ်ပိုးမှုနှင့်ထုတ်ကုန်အရံပစ္စည်းထုပ်ပိုးခြင်းပစ္စည်းအဖြစ်ခွဲသည်။ ဒီဇိုင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်သောထုပ်ပိုးမှုစနစ်သည် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့်ထုပ်ပိုးစက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်းများထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု။
ထုပ်ပိုးစက်သည်အထွေထွေအမည်ဖြစ်ပြီးထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကုန်ချောထုတ်သည့်စက်ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်ကဏ္ aspects ၂ ခုခွဲသည်။
1. စုဝေးလိုင်းထုတ်လုပ်သည့်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ အစားအစာ၊ ဆေးဝါး၊ ဓာတုပစ္စည်းနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများရှိအိတ်များသို့မဟုတ်ပုလင်းများတွင်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ထုတ်ကုန်ဖြည့်ခြင်း၊ တံဆိပ်ခတ်စက်၊ သင်္ကေတစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်အရည်၊ ငါးပိ၊ စက်၊ အမှုန့်အမှုန့်ထုပ်ပိုးစက်စသည်
2. အရံပစ္စည်းထုပ်ပိုးပစ္စည်းကိရိယာများကို၎င်းထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရေမှုန်ရေမွှား၊ ရိုက်နှက်ခြင်းနေ့စွဲ၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ချုံ့ခြင်းစသောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ပြီးနောက်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ အဓိကအားဖြင့်: ဖြည့်စက်၊ တံဆိပ်ခတ်စက်၊ ပရင်တာ၊ ထုပ်ပိုးစက်၊ ကျုံ့စက်, လေဟာနယ်ထုပ်ပိုးစက်, etc ။
လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှုနှင့်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းစက်အများစုသည်အလိုအလျောက်အပြည့်ရှိပြီး၎င်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်လုပ်ငန်းစဉ်များစွာကိုပြီးမြောက်စေသည်။ ဥပမာအိတ် - အိတ်ပြုလုပ်ခြင်း - ဖြည့်ကုဒ် - ရေတွက်တိုင်းတာခြင်း - တံဆိပ်ခတ်ခြင်း - ပို့ခြင်းထုတ်ကုန်။ ၎င်းသည်မောင်းသူမဲ့စက်ကိုလည်းသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အလုပ်သမားချွေတာ။
မြင့်မားသောအလုပ်လုပ်ထိရောက်မှုနှင့်ကြီးမားသော output.We ဖောက်သည် output ကိုစွမ်းရည် reuqest အဖြစ်စက် customzied နိုင်ပါတယ်။
သန့်ရှင်းသော၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း။ ထုပ်ပိုးစက်ကို အသုံးပြု၍ သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းခြင်း၊ လက်စွဲစာအုပ်လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းသည်ပစ္စည်းချွေတာခြင်း၊
ခေါင်းအုံးထုပ်ပိုးစက်သည်အလွန်ခိုင်မာသောထုပ်ပိုးနိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်သောထုပ်ပိုးစက်ဖြစ်ပြီးအစားအစာနှင့်အစားအစာမဟုတ်သောထုပ်ပိုးမှုများအတွက်သင့်လျော်သည်။ ခေါင်းအုံးနှင့်တူသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများမပါဘဲထုပ်ပိုးခြင်းအတွက်သာမက၊ Pre- ပုံနှိပ်လိပ်ပစ္စည်းများသုံးပြီးမြန်နှုန်းထုပ်ပိုး။
1.Servo မော်တာနှင့် PLC ထိန်းချုပ်မှု။
4. အရှည်အရွယ်အစားကိုတစ်ချက်တည်း ဖြတ်၍ အချိန်နှင့်ရုပ်ရှင်ကိုချွေတာနိုင်သည်။
၅။ ထိန်းချုပ်မှုအားလုံးကိုဆော့ (ဖ်) ဝဲမှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သည်၊
PLC Controller၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အိတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အော်ပရေတာသည်လိုအပ်သောချိန်ညှိခြင်းကိုညှိရန်လိုအပ်သည်၊ ကြီးမားသောထွက်ရှိနိုင်စွမ်း၊ အချိန်ကုန်သက်သာစေသည်။ ပစ္စည်းကိုချွေတာသည်။ တရုတ် - အင်္ဂလိပ်ပြသခြင်း၊ မျက်နှာပြင်။